Shiinaha TUBE-1112-2 warshad iyo saarayaasha |Kingflex
Tuubada dahaarka xumbo caagga ah ee Kingflex waxay leedahay kuleyl yar oo kuleyl ah, qaab-dhismeedka xumbo-xiran, iyo saameyn dahaar wanaagsan;Maaddada iyo qoyaanka ayaa si buuxda loo gooyay, aan nuugeynin, aan ciriiri lahayn, nolol dheer oo adeeg ah, ka dib baaritaanka SGS, qiimaha la qiyaasay ayaa ka hooseeya heerarka EU-da kuma jiraan walxaha sunta ah, isticmaalka caafimaadka iyo badbaadada, muuqaalka jilicsan iyo quruxda, fudud in la leexiyo, ku habboon oo dhisme degdeg ah, iyada oo aan lahayn qalab kale oo caawiya.
Xogta Farsamada ee Kingflex
Kala duwanaanta heerkulka
Kala duwanaanshaha cufnaanta
Marxalaynta uumiga biyaha
Fasalka 0 & Fasalka 1
BS 476 Qaybta 6aad qaybta 7aad
Tusmada Faafinta Ololka iyo qiiqa Horumaray
Nuugista Biyaha,% Volume
iska caabin fangaska
Iska caabinta ozone
Iska caabinta UV iyo cimilada
Xirmooyinka iyo ku shubashada weelka
Tuubada dahaarka xumbo caagga ah ee Kingflex ayaa lagu soo ururiyay
1. Xirmada kartoonnada caadiga ah ee dhoofinta Kingflex
2. Kingflex dhoofinta bacda caadiga ah
3. sida shuruudaha macmiilka
1.Full taxane ah oo ka mid ah alaabooyinka kuleylka kulaylka, oo ay ku jiraan alaabta caagga ah ee xumbo-xajinta, dhogorta dhalada, dhogorta dhagaxa, iwm.;
2. Iibka saamiyada, dhig dalabka iyo keenista isla markaaba qeexida caadiga ah;
3. Tayada ugu sareysa ee alaab-qeybiyaha kuleylka kulaylka ee Shiinaha iyo soo saaraha;
4.Qiimaha macquulka ah iyo tartanka, wakhtiga hogaaminta degdega ah;
5. Keeno xidhmo xaleedka oo dhan macaamiisheena.Ku soo dhawoow inaad nala soo xidhiidho oo aad booqato shirkaddayada iyo warshadahayada wakhti kasta!
1.Waa maxay alaabta dahaarka?
Alaabta dahaarka waxaa loo isticmaalaa in lagu daboosho tuubooyinka, tuubooyinka, taangiyada, iyo qalabka goobaha ganacsiga ama warshadaha waxaana sida caadiga ah lagu tiirsadaa in lagu xakameeyo heerkulka kala duwanaanshiyaha heerkul aad u ballaaran midka guriga caadiga ah.Dahaarka guriga ama la dego ayaa caadi ahaan laga helaa gidaarada iyo saqafka bannaanka waxaana loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo jawiga guriga mid joogto ah, heerkul nololeed oo raaxo leh.Kala duwanaanshaha heerkulka jawiga dahaarka guriga ayaa inta badan kiisaska aad uga yar midka caadiga ah ee ganacsiga ama warshadaha.
2. Ka waran wakhtiga hogaanka?
Dalabka badeecadaha waaweyn wakhtiga keenista wax soo saarku waxa uu ahaan doonaa saddex toddobaad gudahood ka dib marka la helo lacag-bixinta.
3.Sidee loo tijaabiyaa alaabtaada?
Waxaan caadi ahaan ku tijaabinnaa BS476, DIN5510, CE, REACH, ROHS, UL94 shaybaadhka madaxa banaan.Haddii aad hayso codsi gaar ah ama codsi tijaabo oo gaar ah fadlan la xidhiidh maamulahayada farsamada.
4.Waa maxay nooca shirkaddaada?
Waxaan nahay shirkad isku xirta warshadaha wax soo saarka iyo ganacsiga.
5.Waa maxay alaabtaada ugu muhiimsan?
NBR/PVC dahaarka xumbo caagga ah
Gym-ka suufka isboorti ee naxdinta leh ee caag-celinta
Daboolka kulaylka hooseeya ee qashinka synthetic...
Cufnaanta Sare ee Qalabka Acoustic Panel Sound Nuugista Cei...
Daboolka Cryogenic dabacsan ee Nidaamka Cryogenic
NBRPVC duub xaashida dahaarka xumbo caag ah
bustaha dahaarka kulaylka dhogorta dhagaxa